Momba anay - Shijiazhuang Wangjie Trade Co., Ltd.
Shijiazhuang Wangjie Trade Co., Ltd.dia mpamatsy entana fampiroboroboana manokana.Ny vokatray dia ahitana satroka baseball, satroka ba nataony, satroka ara-panatanjahan-tena, taratra masoandro, apron, kitapo fiantsenana, lamba famaohana, fonon-tanana sy ny sisa.
Isika koa dia afaka mamokatra araka ny mpanjifa teti-dratsy na santionany.Ny vokatra dia aondrana manerana izao tontolo izao, indrindra ny tsenan'ny Eoropeana sy Amerika Avaratra.
Nanolo-tena amin'ny kalitao
Ny kalitao no zava-dehibe voalohany.Mifantoka bebe kokoa amin'ny kalitaon'ny vokatra izahay, ao anatin'izany ny fitaovana amin'ny lamba, ny kojakoja, ny asa, ny fonosana, ny fotoana fandefasana, ny fiarovana ary ny serivisy hafa, sy ny sisa, ny mpiasa QC matihanina dia manatanteraka azy ireo. amin'ny fanaraha-maso kalitao tsara.Ny kalitaonay dia eken'ny mpanjifanay any ivelany rehetra ary manana laza tsara.Raha lazaina amin'ny teny iray, ny tanjonay dia ny mamatsy ny vokatra tsara ho an'ny mpanjifanay rehetra amin'ny vidiny mirary.
Tamin'ny 2016, ny orinasa dia namolavola tetikasa vaovao, hydroxypropyl methyl cellulose, izay ampiasaina indrindra ho an'ny simenitra simenitra, Tile simenitra, Gypsum coagulation slurry, Seam simenitra, coating Auxiliary Agents.Raha liana ianao dia mifandraisa aminay, afaka miantoka ny kalitao sy ny serivisy tsara indrindra ho anao izahay.
Ny fahafaha-mamokatra dia mihoatra ny 200,000 pcs ao anatin'ny iray volana.
Tena manantena izahay fa hiara-miasa amin'ny orinasa rehetra izay te-hamoaka vokatra tsara kalitao amin'ny vidiny mirary avy any Shina, ary maniry ny hanorina fifandraisana ara-barotra tsara sy fisakaizana aminao mandritra ny fotoana maharitra toy ny mpanjifanay taloha.
Tena tso-po izahay ary tapa-kevitra ny hiara-miasa amin'ny mpanjifanay rehetra ary manantena ny hanorina fifandraisana mahasoa sy maharitra amin'ny namana maro kokoa. details.Ny antontan-taratasy rehetra dia hovaliana ao anatin'ny 24 ora.
satroka golf dada satroka snapback satroka dada satroka flat peak Custom embroidery logo dad satroka papa sport cap